All ndị njem nleta na-arọ nrọ banyere ịga zoro ezo bara nnukwu uru na Europe dị ka nke ọma dị ka ndị a ma ama European obodo ukwu. A foto nke ha ji obi ụtọ guzo n'akụkụ ifflọ Elu Eiffel, Colosseum ma ọ bụ Big Ben-eme ka onye ọ bụla na-eche ahụkebe (na anyị na-kpam kpam na-na!). Ma ị bụ onye Instagram riri ahụ ma ọ bụ a "ezi" njem, aga ebe n'ụwa bụ ihe niile!
Ihe mbụ ị na-eche nke mgbe ekwu okwu banyere Luxembourg bụ mmiri. The mba a maara nke ọma kpọmkwem n'ihi ha. Ma Luxembourg si steepled ụka, nkume ụlọ, na obere ọwa mmiri na-eme ka ịga leta ya na-atọ ụtọ karịa ka ị ga-atụ anya ya. Ọ bụ ya mere ebe a bụ otu n'ime obere zoro ezo bara nnukwu uru na Europe n'etiti a Afrika isi. Ọ bụ a ebe mara mma, tọrọ na ebe ndị Petrusse na Alzette osimiri izute. Ị nwere ike ịga ụfọdụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ na hip Ogwe na nso etiti etiti. Ọzọkwa, ruu Philippe II nwere a ụyọkọ nke ụlọ ahịa, otú i mma-adị njikere ka na-eji a ole na ole ebu! kpam kpam Luxembourg bụ a zuru okè n'ebe maka a ihunanya izu ụka.